WhatsApp ho an'ny Apple Watch dia eo akaiky eo | Vaovao IPhone
Tsy vitsy ny mpampiasa izay, misy antony marim-pototra, nitaraina momba ny fananana Apple Watch ary miandry ny WhatsApp hanavao ny fampiharana azy mba hifanaraka amin'ny smartwatch an'ny paoma. Ny Apple Watch dia niaraka taminay nanomboka ny volana aprily ary ny watchOS 2, izay ahafahantsika mamorona rindran-tany ho an'ny famantaranandro, dia efa amam-bolana maro lasa izay. Ka inona no andrasan'ny WhatsApp? Eny, manaraka ny gadona vaovao nalain'izy ireo hatramin'ny nanombohana ny iPhone 6 tamin'ny volana septambra, ny kinova an'ny WhatsApp mifanaraka amin'ny Apple Watch Efa akaiky teo io.
Ao amin'ny beta farany Nahita rakitra iray antsoina hoe "watchAppBundleIdentifier" ny WhatsApp, izay manondro fa efa nanomboka nanandrana kinova iray izay hifanaraka tanteraka amin'ny famantaran'i Tim Cook sy ny orinasa izy ireo. Rahoviana anefa no hivoaka ilay kinova ofisialy? Raha manantena zavatra tsara isika ary mitandrina ireo volana vitsivitsy lasa, dia mety ho tonga haingana noho ny eritreretintsika izany. Raha aleontsika mitandrina, azontsika atao ny mieritreritra fa mbola hamoaka kinova hafa izy ireo miaraka amin'ireo fanatsarana hafa nandrasana, saingy tsy dia azo inoana izany.
Miaraka amin'ity kinova vaovao ity dia afaka manao izany ny mpampiasa Apple Watch mamaly hafatra avy amin'ny famantaranandronao, ary koa fananana sary famantarana eo amin'ny efijery an-trano azo anaovana akanjo. Avy amin'ity kisary ity, amin'ny maha-fampiharana anao azy io dia azonao atao ny manokatra ny WhatsApp amin'ny famantaranandro jereo ny resaka rehetra ary mandefasa hafatra na dia misy hafatra tsy mbola voaray aza tamin'io fifandraisana io taloha.
WhatsApp dia lasa tsara tato ho ato. Tao anatin'ny fotoana fohy dia namoaka fanavaozam-baovao roa izy ireo izay manampy fampifanarahana amin'ny efijery 3D Touch (ny iray izay nanampy hitsin-dàlana ary ny iray hafa Peek & Pop) ary ny herinandro lasa teo dia namoaka kinova vaovao ihany koa izy ireo izay misy fanovana kely eo amin'ny sehatr'asan'ny mpampiasa. Mbola nanisy vaovao be ry zareo hanatanterahana ny tsaho rehetra, saingy tsy misy isalasalana fa napetraka ny batery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Akaiky ny WhatsApp ho an'ny Apple Watch
Eny, saingy misy zavatra tsy voalaza ary tsy nilaza izany ny olona tao amin'ny WhatsApp, fa afaka mamaly ny fampandrenesana ianao na dia avy amin'ny paoma aza, rehefa tonga ny fampandrenesana dia hita ny bokotra valiny.
Tsara ny fahalalana fa ny rindranasa zanatany dia ho avy miaraka amin'ny fahasarotana misy azy avy.
Raul Delgado dia hoy izy:
Tena tiako ny hahatongavany, satria amin'izay no ahafahantsika mampiasa ny paoma hanombohana resaka 🙂
Valiny tamin'i Raul Delgado
Mandeha ny bateria. Vaovao tsara.
rdv099 dia hoy izy:
ho an'ireo izay manana iOS 9.0.2 raha afaka mamaly ny hafatra WhatsApp avy amin'ny Apple Watch izy ireo, ary tsy ilaina ny manavao ny iOs 9.1 ...
Ny zavatra tsy maintsy ataon'izy ireo dia ny mametraka ny WAREPLY tweak avy amin'ny repeso ofisialy Cydia
Avy eo ampandehanana ny tweak avy amin'ny fikirana, vonoy ny telefaona sy ny famantaranandro paoma, ary miasa tsy mampino ...
Ny tweak dia tsy miresaka na inona na inona ho an'ny Apple Watch, fa nametraka azy aho ary nanomboka niasa tamin'ny famantaranandroko ny valiny haingana, ... nitady ilay lohahevitra tao amin'ny Reddit aho ary maro hafa koa no niasa
Valiny amin'ny rdv099
Hoppy dia hoy izy:
Misaotra, fa marina fa afaka fotoana fohy dia afaka mamaly mivantana ireo hafatra amin'ny famantaranandronao ianao.
Mampalahelo fa ny fampiharana toy ny Telegram dia tsy manana laza tahaka ny tena izy. Soa fa mampiasa iMessage betsaka kokoa aho.
Mamaly an'i Hoppy
Mila fampandehanana lehibe, mamaly amin'ny alàlan'ny hafatra am-peo, satria indraindray tsy mandeha ny baikon'ny feo, tsy mahay manao fe-potoana, na koma, na fononteny sns. Ny zavatra tsara indrindra dia ny mamaly amin'ny alàlan'ny hafatra am-peo.
Bryan nuñez dia hoy izy:
Ireo fampiharana fandefasan-kafatra ireo dia tokony hanararaotra tsara ny mikrô ropWatch ary ahafahanao mandefa Voice Notes. Mahafinaritra ny mahay mamaly amin'ny soratra fa tsy fantatra anao izany rehefa mametraka fanontaniana ianao.
Tsy haiko raha sendra olona iray izay talohan'ny nisian'ilay sary fampiharana FB Messenger tamin'ny famantarananao, fa izao nanjavona (Tsy azoko antoka hoe iza no fanavaozana) ary ankehitriny tsy afaka mandefa hafatra am-peo avy amin'ny hatoloko aho
Valiny tamin'i Bryan Nuñez
Bryan Nuñez, raha manana ny app fb messenger amin'ny famatrehako aho dia ampidiro ny app  fiambenana hijerena raha manana kilema "fampisehoana amin'ny  fiambenana" ato amin'ity rindrambaiko ity ianao, raha tsy apetraka indray ary afaka mandefa feon-tsoratra tokony hataonao miverena miverina amin'ny app  mijery / hafatra / hafatra audio / ary mila misafidy ianao amin'ny «dictation» «audio» «na manana safidy misafidy isaky ny mandefa»
sheina dia hoy izy:
Fantatrao ve ny antony misy ny olona sasany na dia manana ny fanavaozam-baovao rehetra aza izy, ny safidy hamaly ny WhatsApp dia tsy hita avy amin'ny fiambenana ??? Niezaka ny zava-drehetra aho ary tsy fantatro izay mitranga
Mamaly an'i sheina
Ary ny fampiharana teratany ??? WhatsApp dia tantara madio ...
Ahoana no hametrahako ny WhatsApp amin'ny Apple Watch?
Ary manohy tsy misy an'io kinova io izahay….
2018 ary mbola tsy tonga, eny lavitra izany zorony izany
Tsy misy zorony, boribory io, ka izay no tsy ahatongavany mihitsy.
Podad IPad News 2x11 Podcast: eo am-pelatanantsika ny iPad Pro